Olee otú ịgbanwe ndabara gallery ngwa maka gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Taa, anyị na-ewetara gị ngwa ọhụrụ maka sistemụ arụmọrụ gam akporo ma ọ bụrụ na Gallery ngwa nke na-abịa na ndabara bụ usoro ihe a anaghị eme ka ị kwenye. O doro anya na a na-etinye ngwa ndị ndabara na sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka anyị ọ bụghị ndị ọrụ niile na-asọpụrụ ha mgbe niile.
Maka ndị ọrụ niile ahụ adabaghị na gam akporo Gallery ngwa, Anyị na-ewetara ya ihe ọzọ na ya na-akpọ onwe ya QuickPic.
Ngwa ngwa ngwa bụ ihe ọzọ ga - enyere anyị aka ijikwa foto na vidiyo nke anyị ji na ngwaọrụ mkpanaka anyị na - arụ ọrụ sistemụ gam akporo. QuickPic adịworị na mbipute 4.0 ma dị maka nbudata n'efu na Playlọ Ahịa Google.
Ngwa a bụ 100% dakọtara na ngwaọrụ mkpanaka nke nwere sistemụ gam akporo arụnyere na ụdị nke abụọ ya. N'ime ngwa a ị ga - enwe ike ịme foto foto gị n'igwe ojii nke anyị na-egosi. O nwekwara nkwado maka ebe nchekwa dị ọsọ ọsọ, ike idozi nchekwa site nha ma ọ bụ nkwado maka akaụntụ Google maka nbanye.
Yabụ ugbu a ịmara, ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ma ọ bụ na ike gwụrụ gị na ngwa Gallery dị na ekwentị mkpanaaka gị ma chọọ ịnye usoro gị ihe ọhụrụ, budata ngwa ngwa QuickPic ma malite ịchọpụta ọrụ ya, ebe ọ bụ na anyị ahụla, ọ na-eme ọtụtụ omume karịa nke na-abịa na ndabara na usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi gbanwee ngwa ngwa ndabara nke gam akporo na QuickPic
Peeji a na-eme mkpari naanị ihe ọ na-eme bụ ịkpọsa ngwa ahụ.
Zaghachi ka uygtuyg